ओलीलाई प्रश्न कुन मुख देखाएर चुनावमा आउनुहुन्छ ? — Purbicommand
ओलीलाई प्रश्न कुन मुख देखाएर चुनावमा आउनुहुन्छ ?
२०७७ पुष ६, सोमबार ०४:२० गते
उर्लाबारी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको भावना विपरीत संसदका विघटन गरेको र त्यसका विरुद्ध सबैले देशभक्तहरु एकजुट भएर आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आएको मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा लिम्बू (कुशल)ले बताउनु भएको छ ।
ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको भावना विपरीत संसद विघटन गरेर अब कुन मुख देखाएर जनतासँग मत माग्न आउनुहुन्छ भन्दै सांसद लिम्बूले प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले अहिले कोरोनाको समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रविरोधी कदम लिनु आपत्तीजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
जनताको भावना विपरीत काम गर्ने कसैलाई छुट नभएको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सारा नेपाली एकजुट भएर लागि पर्ने उहाँको भनाई छ । छलफल र परामर्शको माध्यमबाट अघि बढ्ने वातावरण हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्नु अराजक र व्यक्तिगत स्वार्थको उपजबाहेक केही नभएको उहाँको टिप्पणी छ । ओलीको यो कदमलाई जनताले कहिले माफ गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।